Alahadin’ny SAFIF 2018. – FJKM
Alahadin’ny SAFIF 2018.
« Mandehana amin’ny rariny sy ny hitsiny ao amin’ny Tompo «
Fiarahabana Apostolika : Rom 1.7
Fiderana : Sal 135.1-3
Hira Fifohazana 345.1,3
Sitrapon’ Andriamanitra : Efes 6.17-18 / Sal 119.1,2
Famelankeloka : Jer 31.4 / Rom 8.1 / Sal 32.1-2
Hira Fifohazana 324.1,2
Fanekempinoana (Lah 1)
Hira Seha-pitaizana sy Antoko mpihira
Hira Fifohazana 105.1
Hira Fifohazana 328.1-2
Hira Fifohazana 145.4
HAFATRA Alahady SAFIF 2018.
« Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana »Efes 2.8a
Hampitomboina ho anareo anie ny famindrampo sty ny fiadananan ary ny fitiavana . Ny Birao sy ny Tonian’ny Sampana Fifohazana Foibe dia faly miarahaba sy mamangy antsika rehetra isam-pitandremana .
Ho an’izay olona voantso , malala ao amin’ Andriamanitra Ray sy voatahiry ho an’i Jesoa Kristy , ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanan’ny Tompo.
Faly miarahaba antsika fiangonana sy ny mpikambana rehetra ato amin’ny Sampana Fifohazana FJKM mahatratra indray izao Alahadin’ny SaFiF izao. Fotoana lehibe sy sarobidy izany satria fotoana hitrotroana amam-bavaka antsika manokana , fotoana hampahafantarana bebe kokoa, ny asa sy ny fiainan’ny Fifohazana , ary indrindra fotoana hanaovana hetsika manokana mba hanohanana antsika amin’ny endrika rehetra.
Misaotra ny Tompo Jesoa isika fa tanteraka avokoa izay mba nokinasa tao anatin’ny herintaona izay . Mampahery antsika rehetra koa ,satria hiatrika zava-dehibe isika amin’io taona ho avy io . Hifarana mantsy ny taom-piasana 2015-2019 ka hiatrika ny fanavaozana tomponandraikitra ny isan’ambaratongan-drafitra ary voakasika izany isika SAFIF ,ka entanina mba hiomana sy hanomana izany araka ny toromarika izay mbola homena
Miezaka mafy ihany koa isika amin’ny fandraisana anjara ho fanatanterahana ny vinan’ny FJKM manao hoe: »Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara ». Ny kaominina Tsimafana ao amin’ny SP Fahazavan’ Atsimo Andrefana (akaikin’i Belo Tsiribihina) no hanorenantsika fiangonana ary efa mitsangana ny vondron’olona mpiara-mivavaka ankehitriny .
Miomana fatratra ihany koa isika fa amin’ity taona 2019 iny indray dia hisy ny Recyclage ho an’ny Mpiandry ary mbola hampitaina miandalana ny dinidinika momba izany .
Farany, mifampivavaka isika fa homarihana ny faha-40 taonan’ny safif amin’ny 2010. Mampahery antsika rehetra mba hazoto sy hafana fo amin’ny fanompoana sy ny fanolorantena . »Aza mamihina ny soa amin’izay tokony homena azy , raha azon’ny tànanao atao ihany » (Oha 3.27).
ROBSON RADO Lalaina Johary , Mpitandrina